रूपा गहतराज - कान्तिपुर समाचार
बाँकेका किशोरीहरूले १६ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने अभियानविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रने बताएका छन्  । आइतबार नेपालगन्जमा भेला भएका आठ गाउँपालिकाका किशोरी क्लबका प्रतिनिधिले यसबारे जानकारी दिए  ।
पढेलेखेका युवा कि जागिर खोज्छन्, कि त विदेश ताक्छन् । बाँके, कोहलपुर नगरपालिका–१२, चपरगौढीकी शारदा शर्माले भने पशुपालन रोजेकी छन् । शिक्षा संकायमा भारतको गुवाहाटी विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर पूरा गरेकी उनले ०६८ सालदेखि यहाँ गाईपालन गरेकी छन् । यस्तो कामबाट आफू सन्तुष्ट भएको उनले बताइन् ।
कपिलवस्तु नगरपालिका–४, छोटकी तौलिहवाकी रुक्साना खाँ सोमबार बिहान नमाज पढ्न बडकी मस्जिद पुगिन् । रुक्साना र नयाँटोलकी अमिरुन खाँ नमाज पढेपछि खुसी देखिए ।
रंगले जीवनमा के महत्त्व राख्छ ? रंगबिना जीवनको के अर्थ होला ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका थिए, खजुरमा जम्मा भएका बालिका र किशोरीले ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० मा स्थानीय सरिता गुरुङले बुटिक संचालन गरेकी छन् । लामो समय बुटिक डिजाइनसम्बन्धी तालिम लिएकी उनले यसलाई व्यावसायिक रूप दिएकी हुन् ।
रूपा गहतराजका लेखहरु :
मुस्कान लुटिएजस्ता अनुहार । सिमाना पार गर्न तँछाडमछाड । न खुसी न दुःखी देखिने भीड सिमाना काटेर भारत पसिरहेछ । लक्ष्य सिमला पुग्ने हो । त्यहाँ स्याउका ठूल्ठूला बगैंचा छन् ।
कहाँ हराए महिला ?
मानव बेचविखनविरुद्ध काम गर्दै आएको माइती नेपालले एक वर्षमा ६ सय ९७ महिला हराएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । आव ०७५/७६ मा महिलाको खोजतलासका लागि ८ सय ३३ वटा निवेदन परेका छन् । जसमा बाँकेका मात्र १ सय ३३ महिला हराएका छन् ।
भेरी अस्पतालमा न दरबन्दी न बजेट
चिकित्सक सरुवा र बजेट अभावले दुई वर्षअघि भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा सुरु गरिएको मुटुरोग उपचार सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ कार्यरत मुटुरोग विशेषज्ञ कृष्ण अधिकारीको बढुवासँगै उनी वीर अस्पतालमा सरुवा भएका छन् । उनको स्थानमा सरकारले कसैलाई पठाएको छैन । करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई साउनबाट तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै अस्पताल प्रशासनले चिठी बुझाएको छ ।
दुर्घटनामा ४५ वन्यजन्तु मरे
तीव्र गतिमा चलाइने सवारीसाधनका कारण निकुञ्ज खण्डमा पर्ने राजमार्गमा वन्यजन्तु मारिने क्रम बढेको छ । वर्ष ०७५/७६ मा भएका सडक दुर्घटनामा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका राजमार्गमा भएको सडक दुर्घटनामा ४५ वन्यजन्तु मारिएका छन् ।
हरिया चुराको कारोबार बढ्याे
साउन सुरु हुनासाथ हरिया चुराको कारोबार बढेको छ । बालकदेखि वृद्धले फेसनका रूपमा यस्ता रंगका चुरा लगाउँछन् । यहाँ फुटपाथ, हाटबजार र ठूला पसलमा यस्ता रंगका चुरा किन्ने र लगाउनेको भीड देखिन्छ ।